Umphathi kaJali uchitha imibiko yokuthi uzobuyela ku-PSL | News24
Cape Town – Umphathi wezindaba zomdlali owayegijima esiswini ku-Orlando Pirates, u-Andile Jali, nokunguPaschalis Tountouris, usekuqinisekisile ukuthi lo mdlali oneminyaka engu-27 ubudala angeke aze abuyele kuPSL yize noma ekhuhla ibhentshi kwi-KV Oostende yaseBelgium.
Ngokombiko we-website i-voetbalnieuws.be, uTountouris uthe lo mdlali wasesiswini uzoqhubeka ahlale kule kilabhu yaseBelgium kuze kube unyaka ka-2018.
“Usebe nesizini enzima kanti ubukelwa phansi futhi uthathwa kancane, kodwa-ke, i-Oostende ikhethe indlela kuze kube maphakathi kuka-2018,” kusho uTountouris.
“UJali useyawukhumbula umdlalo ngoba usadlale kancane, kodwa uyabona emidlalweni yakamuva yama-play-off ukuthi unokuningiakwenzayo okusezingeni eliphezulu.
“Sicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuqhubekela phambili futhi siphezu kwesixazululo. Ukubuyela eNingizimu Afrika? Lawo mahlebezi akumele akholakale ngoba uneminyaka engu-27 ubudala futhi useneminye iminyaka eminingi ezayo.”
I-website yeSoccer Laduma idalule ukuthi uJali usedonse amehlo ezinkunzi zePremeirship iMamelodi Sundowns yize noma kubukeka sengathi umphathi wakhe uzama ngayo yonke indlela ukuthi amgcine edlala e-Europe.